Faa'iidada iyo faa'iido darrada lacag amaahashada ee bangiga
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Faa'iidada iyo faa'iido darrada lacag amaahashada ee bangiga
Waa dareen bangiga xoog badan oo ah ammaanka in la eego in amaahato lacag ah, laakiin maxaa yeelay, waxaa jira noocyo kala duwan oo qorshayaasha iyo deyn, taas oo laga yaabo in dadka qaar in go'aanka ama ma wanaagsan dheggan.
Intaa waxaa dheer, faa'iidooyinka inaad soo amaahato lacag ee bangiga waa muhiim dabcan sidoo kale inay haleelaan darrada.
bangiga, sida mudnaanta
bangiyada iyo maaliyadda macaamiisha inaad soo amaahato lacag, ee in ay jiraan noocyo kala duwan oo deyn, waa in ay lacag soo amaahato bangiga waxaa ka mid ah gargaarkii sida soo socda.
waa dulsaarka hoose, taas oo ku xidhan sida loo isticmaalo
kaarka bangiga, dulsaarka la maaliyadda macaamilka ayaa qarka u yar yahay marka la barbar dhigo.
Gaar ahaan, amaah multi-ujeeddada, u yeedhay oo amaah ah oo lacag la'aan ah, sidoo kale waxaa jira bangiga in la kireeyo kartaa dulsaar aad u yar oo ku saabsan 4%.
Sidaa darteed, xitaa xoogaa amaahda, u baahan tahay culayska ka yar waqtiga bixinta.
Haddii codsiga amaahda sidoo kale waa dhacdo siman of
bangiga Internet-ku-saleysan, haddii qof uu leeyahay xisaab ka hor, sidoo kale ka faa'iideysan lahaa dhibic codsiga waa siman. cinwaanka
ama magaca, waayo, sida da'da iyo goobta shaqada ayaa mar horeba la diiwaan, ka dib markii buuxin doonaan hadii ay ka dheregtaan, sida xaaladda amaahashada. Sababtoo ah oo kuu ogolaanaya in codsiga ka smartphone
, sidoo kale waa ammaan aadanaha oo aadan waqti ama shaqada sida ama guriga.
Intaa waxaa dheer, bangiyada ayaa kala iibsiga mushaar asalka ah ee xisaabta, inta badan waa macluumaad credit u hesho in ay dib u ka badan yahay Hay'adaha kale ee dhaqaalaha.
natiijo, sababtoo ah qaar ka mid ah waxay keeni kartaa in la kordhiyo ee dulsaarka hoose iyo cadadka ugu sareeya ee lacagta, ka qiimaha, haddii First of bangiga ugu weyn oo dhan ka fikirto caching ah, sababtoo ah waxaa lagula talinayaa.
lacag midaysan sidoo kale nabadda ee maskaxda marka aad u baahan tahay < / H2>
the case of credit macaamiisha, inkastoo baaritaanka amaahashada yara dabacsan, xadka ugu horeysay ee guud ahaan waa 500,000 oo 100,000 ka.
Si kastaba ha ahaatee, marka performing deyn bangiga, waxa kale oo aan caadi ahayn xadka oo uu soo dhigay u sarraysaa sida 10 milyan oo yen ka 5 milyan oo yen.
Si kastaba ha ahaatee, tani waa sheeko in amaah ah baabuurta iyo hantida maguurtada ah waa weyn. Marka fulinta deyn magaca
sida kharashka ku nool, ilaa saddex-meelood meel ka mid ah dakhliga, iyo sababtoo ah waxaa la go'aamiyey by sharciga, iyadoo wax dhib ah maleh inta aan la samayn karaa oo keliya amaahashada in this xadka sare.
codsigaaga kooban u badan tahay inuu amaah
dheeraad ah lagu soo koobay amaahashada "xoojinta deynta" sidoo kale waa, waxaad isticmaali kartaa in amaahashada bangiyada.
Tani waxay sidoo kale waa adeeg ka mid ah amaah bangiga gaar ah in lacagta ugu badan ayaa lagu wadaa in la kordhiyo. Tan iyo markii ay macquul tahay in lagu cabudhinayo dulsaarka
iyo danaha badan, aad noqon doonaa xataa dad ammaan ah, kuwaas oo cidhiidhi ku jira in bixinta.
sidoo kale waa waqti lumis khasaaraha ka hor amaahashada
Haddii aad amaahato lacag bangiga
, codsiga waxaa la samayn karaa laga bilaabo sida Internet ama daaqad.
Si kastaba ha ahaatee, digtoon ee natiijada imtixaanka ayaa laga yaabaa in lagu sameeyo dhowr maalmood laga bilaabo maalinta ku xigta ka dib. Haddii aad si gaar ah u wada amaahan xaddiga lacagta
yahay, in baaritaan daqiiqadii Let ayaa sheegay in ay qaadato waqti.
maaliyadda macaamiisha iyo sidoo sannadihii la soo dhaafay, waxaa laga yaabaa in sidoo kale sameeyey adeegga ku salaysan baaritaan xawaaraha ee Uurii ah. Inkastoo
sida lacagta ugu badan iyo ugu horeysay ee amaahda ayaa lagu wadaa inuu hoos u, waxaanu isla markiiba u baahan tahay lacag, waxa uu noqon lahaa war wanaagsan u tahay dadka.
Intaa waxaa dheer, tan iyo dulsaarka sidoo kale waa meel niyada ka waa weyn yahay, fadlan isku day in aad u aragto website bangiga ee ilaa iyo inta ka welwelina.
Gaar ahaan, haddii amaah kaarka bangiga Internet-ku-saleysan, waxaa sidoo kale waa meel la yiraahdo suurto gal ah ilaa dib u eegista maalin isku mid ah iyo deyn maalin isku mid ah.
Si kastaba ha ahaatee, sababtoo ah waxaa jira suuqa kala lahayn in ay samatabbixin waraaqaha layska rabo, fiiro gaar ah u barta at kaas oo qaab boosto taariikhda dambeysa. Xaaladaha qaarkood
, waraaqaha aan la fulin karo amaahda si ay u gaaraan, sababtoo ah kiis ayaa sidoo kale ugu baaqay in ay u hubiyaan in ka si fiican u bartay ilaa aad saxiixdo.
kaarka bangiga waa ugu badnaan mid ah faa'iidooyinka hoos u dhigi kartaa heerka dulsaarka.
sida marka aad rabto in aad codsato xoojinta deynta iyo markii estate dhabta ah iyo sida sare sida shopping baabuurta, si loo yareeyo yareeyo lacagta ugu dambeeya uu noqon doono musharaxa ugu horeeya.
Intaa waxaa dheer, bangiga waa meel ay ku takhasusay oo ku saabsan sida ay u shaqeeyaan lacagta ay ka shaqaynayaan. Ama
abaalmarin karaa iyadoo la ilaalinayo nolosha ah haddii Tatere nooca qorshaha bixinta, iyo waa ay fududahay in la tasho dulsaarka, oo ay ku jiraan waxyaabaha sida immisa in isagoo ah hanuuniye, kuwa ka welwelsan tahay amaahda ah, marka hore isku day inaad la hadasho bangiga sidoo kale waa fikrad wanaagsan.